Tuesday February 12, 2019 - 12:07:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Abu Dubai ee wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta waxaa lagusoo gaba gabeeyay shir lagu sheegay in lagu walaalaynayo muslimiinta iyo Kirishtaanka.
Shirkaan waxaa ka qeyb galay Baadari Faransiis oo madax u ah Faatikaamka iyo Axmed Dayib oo ah hoggaamiyaha Jaamacadda Al Azhar ee dalka Masar, intii uu shirkan socday waxaa dhacay arrimo aan horay uga dhicin dhulka Jaziiradda Carabta tan iyo markii ay burburtay Khilaafadii islaamka.
Markii ugu horraysay ayaa Kaniisad iyo Masjid layska hareer dhisay kadibna dadka lakala dooransiiyay in ay geli karaan Masjidka iyo Kaniisadda, Sheykhul Azharka Masar iyo Boob Faransiis ayaa xabadka isisaaray waxayna sheegeen in ay yihiin walaalo isjecel!.
Shirka iscafinta Bani Aadan ee wadanka wadanka Imaaraatka Carabtu martigeliyay ayaa dad badan ka yaabiyay waxaana banaanka usoo baxay wajiga dhabta ah ee Hoggaamiyaha Jaamacadda Al Azhar iyo maamulayaasha dowladda Imaaraatka Carabta.
Halkan ka degso Warbixinta ama hoos ka Daawo.
Warar sheegaya in dhaxal sugaha dowladda Imaaraatka uu la xanuunsanayo cudurka Carona Virus.